Maalinta: Sebtember 22, 2018
Baaskiilada Dooxada Bariisku waxay bixin doontaa Caawin weyn oo Isboorti ah
Mehmet Kasapoğlu, oo u yimid Baybalka Baaskiilka ee loogu talagalay tartamada Sakarya MTB Cup, wuxuu yiri: gez Waxaan booqanay dooxada maanta oo waxaan gaarnay tartamada koowaad. Runtii waa isboorti qurux badan oo loogu talagalay isboortiga baaskiilkeena iyo faafinta dhaqanka baaskiilka. [More ...]
Xilliga lacag la'aanta ah ee bilaashka ah ee basaska dadweynaha ee gaarka loo leeyahay
Si loo bixiyo gaadiid dhakhso leh oo soo noqnoqda oo loogu talagalay muwaadiniintayada ku sugan magaalada Izmit, waaxda Gaadiidka Dadweynaha ee Magaalada Kocaeli waxay Bilaabaysaa adeegyo lacag la'aan ah basaska dadweynaha ee gaarka loo leeyahay. [More ...]
Madaarka Sabiha Gökçen ayaa ka dhigi doonta Khadka Metro
Qeexidda Sabiha Gök linesen metro, oo bixin doonta xiriir la leh garoonka diyaaradaha, ayaa lagu wareejiyay Wasaaradda Gaadiidka iyo Kaabayaasha iyada oo wareegtada Madaxweynaha uu soo saaray. Söğütlüçeşme-İncirli oo loo arko inuu badal u yahay cufnaanta metrobus ee khadadka la wareejiyay [More ...]
TFF oo soo bandhigay Trabzon oo kale! Tareenka iyo Madaarka ...
Trabzon sida 9 kale deegaanka iftiimiyay in warbixinta marka la barbar dhigo heshay maalgelinta ugu Trabzon, Turkey ee kubada cagta u sheegay labada xaaladda ay ku sugan mashruuca qorshaysan labada. STADIUM IYO TRABZON Hordhac [More ...]
Taariikhda Ka Furitaanka Madaarka Cusub ee Istanbul
Taariikhda furitaanka garoonka diyaaradaha ee cusub ee Istanbul ayaa is bedeshay. Sida ku xusan heshiiska u dhexeeya IGA, Maamulka Garoomada Diyaaradaha Gobolka (DHMI) iyo Turkish Airlines (THY), furitaanka garoonka cusub ee Istanbul wuxuu noqon doonaa 31 Diseembar 2018. [More ...]
Lyrboton Kome Magaalo Waddan Lagu Heli Karo
Duqa Magaalada Kepez Menderes Türel, 3, wuxuu ka qeyb galay xafladda furitaanka magaalada qadiimiga ahayd ee Lyrboton Kome. Markii la dhammaystiro Mashruuca Nidaamka Tareenka Marxaladda, dalxiisayaasha yimaada garoonka waxay qaadan karaan nidaamka tareenka oo booqan karaan magaalada qadiimiga ah. [More ...]
Gebze-Halkalı Maxkamadeynta Sadaxda Gobollada La Bilaabay
Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha M. Cahit TurhanHalkalı waxay ka bilaabeen tijaabadooda tijaabada khadka khadka magaalada, waxayna yiraahdeen, wadooyinka tijaabada ah ee loo yaqaan 'Deneme Trial Drive' ayaa dhamaan doona dhamaadka sanadkaan. Dhameystirka wax soo saarka haray iyo mashruucan dhammaadka sanadka, [More ...]
Horumarinta Horumarinta ee Dekedda Boosaaso ee Dekedda
Aydın-Denizli Motorway hindisada waxaa dib loogu dhigay 10 Oktoobar sababtuna ahayd xilliga qandaraaska oo aan ku filnayn. Mashruuca wadada weyn ee Aydın iyo Denizli ayaa loo rogay sheeko abeeso ah. Agaasinka Guud ee Wadooyinka [More ...]
TCDD oo ku guuleystay Bandhiga InnoTrans ee Berlin
TCDD, oo udub dhexaadka u ah soo booqdayaasha maxalliga ah iyo kuwa shisheeyaha ah ee leh ururradeeda guulaha badan leh, ayaa ku guuleysatay finalka 'nonnoTrans Fair' ee Berlin withnnoTrans Fair. 12 ee magaalada Berlin, Jarmalka [More ...]
Haydarpaşa Tababarka Gawaarida Tareenka
Xarunta Soodhadka Sayniska Waxay Bixineysaa Fursadaha Shaqaalaha ee Kumanaan kun
Duqa magaalada Samsun Magaalo Weyn Zihni Şahin wuxuu ka qeybgalay Shirweynihii Caalamiga ahaa ee Isku Xirka Saadka ee lagu qabtay Samsun Logistics Center ee degmada Tekkeköy, halkaas oo degmadu ay iskaashi weyn la leedahay. Waxaa ka soo qayb galay masuuliyiin badan oo dawlada ka tirsan iyo dad ganacsato ah [More ...]
Madaxwayne Sahin Ashura Curyaaniinta Rakaabka Tareenka
Duqa magaalada Samsun Zihni Sahin, Muharram sababta oo ah bisha uu gacantiisa ku haysto rakaabka taraamyada ayaa bixiya ashura. Diyaar u ah in loo qaybiyo 3 kun oo qof Ashura Madaxweynaha Sahin, darawalada ma iloobin. Tareenka Duqa Magaalada Şahin [More ...]
A First ee Turkey! Hoos u dhigida Taximeter
Kacdoonka cashuurta ee Muğla ayaa muwaaddinka ka hor istaagaya taksiga darawalnimada taksiga inuu noqdo duqa magaalada Mugla Dr .. Osman Gurun lagu tuuray by si ee noociisa ah ee Turkey. hirgelinta nidaamka cusub dhigay markii ugu horeysay ee Turkey [More ...]
Raadinta qulqulatooyinka taariikhda ah ee Taariikda
Dawlada Hoose ee Magaalada Adana, Wadooyinka Waaweyn 5. 1634, oo ay hoos timaado mas'uuliyadda Agaasinka Gobolku, waxay nadiifisaa qodobbada ku qornaa rinjiga buufin leh ee biriijyada sanadlaha leh oo ay kujiraan cadaadis. Maamulka Magaalada Caasimadda ah, waa mid ka mid ah astaamaha magaalada 1634 aqoonsiga taariikheed ee Taşköprü'de [More ...]